Maye, kodwa iqiniso - snoring ingenye izithiyo nokuphila komkhaya okujabulisayo. Ngokwesibonelo, emazweni ahlukahlukene, kusukela 7 kuya kwangu-30 imishado iphela kangaka nje ngenxa yalesi sizathu. Cishe, umbhangqwana wazama ukulungisa inkinga ngokukhetha isehlukaniso. Nakuba namuhla ikhambi snoring - hhayi fancy, ungakhetha ukhetho kangcono ngokwabo.
Ukuqeda snoring odinga ukukwazi imbangela yayo. Okuvame kakhulu iyona isisindo esengeziwe. Kodwa amahwahwa esidumbu ukuthi imali entanyeni, ubeka ingcindezi yomoya futhi unciphise inesikhala yabo. Ngakho-ke, ikhambi elilula ngoba snoring bantu ukuba ikhuluphale - ukunciphisa umzimba. Neminye Factor ukulungisa inkinga cishe njalo senziwa.
Ukubhema umphumela chemical ku amavesi acinene, sithuthukisa ukukhiqizwa isikhwehlela kuwo, nakho kuholela snoring. Kukhona nendlela efakazisiwe yalowo obhemayo. Ngaphambi kokulala udinga ukususa emphinjeni kanye omnqumo noma ulwandle uwoyela lalesi sihlahla iminithi elingu-1. Kuyoba gcoba ulwelwesi lwamafinyila yaleli pheshana zokuphefumula nekugwema ukoma.
Utshwala avuse snoring, ngisho abantu abangenayo kubo ngesinye isikhathi. Lokhu kungenxa umphumela okuphumuzayo utshwala ngesikhathi kwenzeka lokhu imisipha zokuphefumula. Njengoba sazi ukuthi utshwala icutshungulwe emzimbeni amahora ambalwa, izincomo kuphela kuleli cala ngeke alale eceleni eziqhamuka emindenini kanye nasemakhaya, ukuze singathwesi casula kubo.
Ngezinye izikhathi, snoring kubangelwa ulimi lushone ethize ukulala ezinkalweni zabo. Ngenxa yalesi sizathu balwa ngempumelelo ekuqaleni kwekhulu le-19, usebenzisa i khambi Folk ngoba snoring. Ngo ngemuva amaphijama ithungwe ephaketheni, okuyinto wafaka isihloko ukukhanya laphetha, akuvumelekile ukulala ezinkalweni zabo. Cishe ngemva kwenyanga umzimba kabusha, kungakhishwa umuntu Ufika esetshenziswa elele ngohlangothi lwakho.
Ukuqeda snoring, kukhona umzimba for the ulimi nomphimbo imisipha. Ziyakwazi okuhle ngoba bathatha okungenani isikhathi, futhi ekwenzeni nsuku ukunikeza imiphumela emihle:
1. Maximum ulimi induku 2 imizuzwana. Phinda izikhathi 30, izikhathi 2 ngosuku.
2. Cindezela iminwe yakho kwesilevu kanye nemihlathi ukuhambisa emuva naphambili izikhathi 25, izikhathi 2 ngosuku.
3. namazinyo aqinile cindezela Wand imizuzu 3 ngaphambi sokulala. Lezi umzimba silondoloze imisipha ithoni emphinjeni ukuthi kuba nemiphumela emihle emasontweni amathathu.
izindlela zesimanje snoring - kudivayisi ukubekwa e ngalo ingaphakathi ngomlomo, ogama isinyathelo kusekelwe nokuvimbela vibration ulwanga esithambile. Abakhiqizi ukunikela kumadivayisi ezahlukene, ukuma ezahlukene kanye nentengo. Indlela ephumelela kakhulu babo efana isibhakela faka usebenza nge ekwandiseni umgudu. Wenziwe ngamunye ngezindinganiso we ngalo ingaphakathi ngomlomo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukusebenzisa lezi amadivaysi kudingeka bakwazi ukuphefumula ngokukhululekile ngokusebenzisa ekhaleni. Ngakho-ke, lapho polyp, komzimba, rhinitis, awayona efanelekayo.
Uma ukwenqena imingcele inkululeko ukunyakaza ku ngalo ingaphakathi ngomlomo kungasetshenziswa njengoba i anti-snoring ekhethekile acinene spray, isibonelo, "Sominorm", "Asonor», «Ukuthula». Lezi amalungiselelo gcoba ulwelwesi lwamafinyila we umphimbo, imbangela yayo imisipha ukungezwani okuncane ukunciphisa ukuvuvukala kanye ukunciphisa isikhwehlela.
Ukuqeda lezi izimbangela snoring, kokubili neoplasms temlomo, a septum hlanhlatha polyp, kudinga olukhulu ejenti snoring - laser. Modern laser imishayo ihlule ngokuphepha ekuvimbela ubuthongo enempilo. Contraindication le ndlela kuyinto elele singathatha, ephelezelwa ukuboshwa zokuphefumula.
Ubuthongo Izidakamizwa olubangelwa egunjini labagula kakhulu: nemithelela Izibuyekezo
Uhlaziyo lobuchwepheshe lwezinketho
Astrakhan: nokuzwa ukuthi bayakufanelekela kokubona, izinkambo idolobha